चुरोट र सुर्तीको लत छोड्न सक्नुभएको छैन भने यसो गर्नुस् « Mero LifeStyle
चुरोट र सुर्तीको लत छोड्न सक्नुभएको छैन भने यसो गर्नुस्
धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थहरुको प्रयोगले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्दछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि धेरै मानिसहरु यसको लतमा फसेका हुन्छन् । यी पदार्थ लामो समय सेवन गरे विभिन्न रोगले सताउँछ । सातै, ज्यानै समेत लिन सक्छ । यसको बानी लागि सकेपछि यसको लत छुट्टाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ । तर दृढ इच्छा राख्ने हो भने यसबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । चुरोट, सुर्तीको लत छुटाउने बारे आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सक डा. रामबहादुर बोहोराको सुझाव यस्तो छ :
– चुरोट तथा सुर्र्तीको लत छोड्नको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको संकल्प हो । यसले म र मेरो परिवारलाई हानी गरिरहेको छ, त्यसैले म यो लत छोड्छु भन्ने भावना मनमा आउनु पर्छ । नत्र कुनै पनि औषधिको सेवनले पनि यो लत छुटाउन सकिँदैन ।
– यो लतलाई हटाउन एकदमै गाह्रो छ सक्दिन होला भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । सकारात्मक सोचको साथ दृढ इच्छा राख्ने हो भने यसबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
– चुरोट र सुर्तीको लत लागेको मानिसलाई एकैचोटी चुरोट छोड्न गाह्रो हुने भएकोले बिस्तारै बिस्तारै यसको मात्रालाई घटाउँदै लानुपर्छ ।
– चुरोट र सुर्तीको लत हटाउनको लागि परिवार र साथीभाईको साथ र सपोर्टले पनि राम्रो भूमिका खेल्छ । यदि परिवारले लत लागेको व्यक्तिलाई साथ र सर्पोट ग¥यो भने उसमा लत छोड्ने हिम्मत बढ्छ ।
– सुर्ती तथा चुरोटको तल–तल लागेको बेला मुख खाली राख्नु हुँदैन । दालचिनी, ल्वाङ र सुकुमेल जस्ता कुराहरू खानुपर्छ ।
हटाउने अर्को उपाय
७ सय एम एल पानीमा आधा चम्चा निलो तुथो (कपर सल्फेट)लाई मिसाउने र त्यसलाई ४ घन्टा सम्म त्यतिकै छोडिदिने । अब त्यो पानीको रंग निलो हुन्छ । यसरी तयार पारिएको पानीले दिनहुँ मुख कुल्ला गर्ने । यसरी दिनहुँ कुल्ला गर्दा चुरोट तथा सुर्तीको लत बिस्तारै हटेर जान्छ ।
#आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सक
#डा. रामबहादुर बोहोरा